HTML Ku Baro AfSoomaali – Casharka 4aad - AqoonKaal.com
Casharkan waxaan ku baran doonaa xeer kooban oo browser-ka u tilmaamaya luqadda uu ku qoran yahay website-ka iyo nooca xeerarka HTML ee la adeegsadey.
Xeerka loo yaqaan DOCTYPE waxa uu suurtagal ka dhigayaa in browser-ku fahmo nooca HTML-ka ee lagu dhisay website-ka. Waxaana lagu qoraa meesha ugu saraysa xeerarka HTML.
Vide-ga casharka 4aad hoos ka daawo:
asc macalin aadbaan kaaga mahadcelina cashirada qaaliga ah ee aad noso gudbisid had iyo jeer qeyrne ilaah haka siiyo .mideeda kale waxaan fahmi waaye qeybta ugu danbeysay ee aad FTB ga ku sheegtay xooga wey igu adagtahay isticmaalkeeda marka iga jaahil bixi ado raali ah ama information dheeri ah iga sii si aan u fahmo waad mahadsantahay
ASC Walaal FTP waxa uu kuu sahlayaa in faylasha laag qaado computerka oo lagu xawilo Server ama server laga soo qaado oooooooo lagu soo xawilo computerka. Waxaad u baahan tahay barnaamij sida FileZilla oo kuu sahlaay in aad isku xiriirisid Computerka iyo server yaalla meel kaa durugsan ama qaarad kale.
Sidaas daraadeed waxaad u baahan tahay akhbaarta serverka sida furaha lagu galo iyo magaca iyo Host naeme oo ay ku siinayaan serverka kuu marti gelinaya websitekaaga. Mahadsanid.
Asc walaal ilahay hakaa ajar siiyo mudo Ayaan raadinayey casharo taxane ah oo HTML ku saabsan. Course ahaan waan qaatey lakiin si dhab ah oo faahfaahsan baan hada u fahmey.
mid Ayaan I dhibtey qaabkaa adiga uGu connect gareysey FileZilla. adigu waxaa ku xiriirsey website ama folderkii Tababar aad u bixisey aniga markaan FileZilla furo “No Site Available” baan arkaa
axmad mxamad says:
wll waxan marayaa casharka 10 aad baan ugu fa iiday wad mahad santahy
shariif Ali says:
Macalin Casharadii 1,2, and 3 kuma aanan so qaadan sawir loso galiyo.
lkn Casharka 4 ayaa ku sharaxday FTP.
sida website ka cadna casharadu waa tixane, marka ma waxaa jira cashar gooni ah oo aad uga hadashay sawirada sida loso galiyo?